बंगुरपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै ‘झलक’ - Tanahun Khabar
बंगुरपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै ‘झलक’
सानेबहादुर नेपाली/दमौली । जिल्लाको ऋषिङगाउँपालिका–५ राम्जाकोटबाट विसं ०६० सालमा दमौली झर्नुभएका झलक बहादुर आलेले बंगुरपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ ।
दमौली आएपछि मासु व्यवसाय थाल्नु भएका आलेले विसं ०७० साल देखि नै व्यवसायिक रुपमा बंगुर पालन गर्न थालेपछि उहाँको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको हो । मासु व्यवसाय संग संगै व्यासनगरपालिका–५ चापाघाट स्थित सिर्दीमा रु.बाइस लाखमा दश रोपनी जग्गा किनेर बंगुर पालन थाल्नु भएका आलेले पछिल्लो समय रााँगा समेत पाल्न शुरु गर्नुभएको छ ।
पृथ्वीराजमार्ग सडकमा रहेको उक्त जग्गाको मूल्य नै रु.करोड भन्दा बढी पर्न सक्ने देखिएको छ । सामान्य परिवारमा हुर्किएका आलेले पशुपालन र मासु व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी हुदै गएकोमा खुशी भएका छन् ।
रु.पाँच लाख खर्च गरी बंगुरको खोर र रााँगाको गोठ निर्माण गर्नु भएका आलेले रु.सात लाखमा बंगुर र रु.पाँच लाख बराबरको रााँगो तयारी अवस्थामा रहेका छन् । उहाँले निर्माण गरेका नौ वटा खोरमा ३५ वटा बंगुर,२५ वटा बँदेल, र दश वटा सुँगुर गरी ७० वटा छन् भने पाँच वटा रााँगा मासुको लागि तयारी भैसकेका छन् ।
आलेले व्यासनगरपालिका–३ स्थित मासुलाइनमा दुई वटा झलक मासु पसल र व्यास–३ देउराली नगरमा तीन ढलानको पक्की घर निर्माण गर्नुभएको छ । दिनमा कम्तिमा रु.४० हजार देखि बढीमा रु. एक लाख सम्मको मासु बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बंगुर र रााँगो पाल्नको लागि दुई जना कर्मचारीलाई खाना बस्न दिएर मासिक रु. बीस हजार तलब खर्च हुने गरेको आलेले बताउनुभयो । फूर्सदको समयमा बेला बेलामा गएर रेखदेख गरी आवश्यक आहाराको व्यवस्था गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त क्षेत्रमा रहेका ३६ वटा मासु व्यवसायी मध्ये बंगुर पालन गरी बंगुरको धेरै मासु बिक्री गर्ने आले नै हुनुहुन्छ । अधिकाँश मासु पसलमा उहाँले नै मासु सप्लार्यस गर्दै आउनु भएको छ । मासु व्यवसायी संघ तनहुँका कोषाध्यक्ष समेत रहनु भएका आले मिहिनेत गर्न सके मासुजन्यबाट राम्रै कमाई गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
बँदेलको मासु प्रतिकिलो रु.छ सय,सुँगुर रु.पाँच सय र बंगुर÷रााँगो रु.चार सयमा बिक्री गर्ने गरेको उहाँकी श्रीमति कृष्णमायाले बताउनुभयो । मासु पसलमा तीन जना जनशक्तिले ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । उहाँले भन्नुभयो ‘कोभिड–१९ का कारण मासुको व्यपार केहि हदमा घटेको छ ।’
महिनामा रु.१२ लाख देखि पन्ध्र लाख सम्मको मासु बिक्री गरेर राम्रै आम्दानी हुदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
ससेजको व्यापार फस्टाउँदै : व्यवसायी आलेले ससेज व्यापार पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको बताउनुभयो । युवायुवतीहरुको आर्कषणको रुपमा रहेको ससेजको व्यापारमा बृद्धि हुदै गएको छ । चार सय ग्राम चिकेन÷बंगुरको ससेजको रु.तीन सय ७० र बफको रु.तीन सय २० मा बिक्री हुने गरेको छ । ससेज निर्माण गरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सप्लार्यस गर्दै आएको आलेले बताउनुभयो ।
ऋषिङलाई चिनाउन म्याराथुन दौड प्रतियोगिता हुने
आदिकवि क्याम्पसका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड